Magacyada iyo sawirrada 15-ka nin ee lagu tuhmay dilka Jamal Khaashuqji | Biyoguurenews.com
Home Wararka Magacyada iyo sawirrada 15-ka nin ee lagu tuhmay dilka Jamal Khaashuqji
Magacyada iyo sawirrada 15-ka nin ee lagu tuhmay dilka Jamal Khaashuqji
Warbaahinta dalka Turkiga ayaa shaacisay magacyada 15 ruux oo u dhalatay Sucuudiga, oo ay saraakiisha xukuumadda Ankara ku tuhunsanyihiin iney ku lug leeyihiin maqnaansha Jamal Khaashuqji, oo ah wariye caan ah oo u dhashay dalka Sucuudiga, mucaaradna ku ahaa xukuumadda, kaasoo markii dad ugu war dambeysay galay qunsuliyadda Sucuudiga ee magaalada Istambul, taariikhdu markey ahayd 2dii bishan Oktoobar.
Inta badan raggan ayaa magaalada Istambul ku tagay labo diyaaradood oo khaas ah, saacado ka hor intii uusan Mr Khaashuqji u tagin Qunsuliyadda, si uu uga helo warqado uu ku diyaarsanayay arooskiisa.
Shakhsiyaadkan ayaa isla galinkii dambe ee maalintaas, iyagoo diyaaradahaas khaaska ah isticmaalaya dib ugu laabtay magaalada Riyaad ee caasimadda Sucuudiga.
Saraakiisha Turkiga ayaa aaminsan in raggaasi ay yihiin xubno ka tirsan sirdoonka Sucuudiga, eedeyntaas oo u muuqata iney taageereen macluumaad furan oo la heli karo.
Mas’uuliyiinta Sucuudiga ayaa beeniyay iney ku lug leeyihiin maqnaanshaha Mr Khaashuqji. Waxay ku adkeysteen inuu ka baxay qunsuliyadda ka dib marki la siiyay warqadihi uu u baahnaa.
Dr Tubaigy wuxuu ku takahsusay cilmiga dambi baarista, wuxuuna darajada mastarka ka dhammeeyay jaamacadda Glasgow ee ku taalla Scotland.
Sannadkii 2015-kii ayaa loo diray saddex bilood oo uu arrimaha caafimaadka ee la xiriira dambi barista uga soo bartay waddanka Australia.
Dhakhtarkana ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay inuu yahay barfasoor ku xeel dheer arrimaha caafimaadka ee la xiriira dambi barista, wuxuu sidoo kale sheegay inuu yahay madaxa dhinaca seyniska ee waaxda dambi barista Sucuudiga.
Ciwaankiisa ayaa sidoo kale ku xiriirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Sucuudiga.
Sannadkii 2014-kii ayuu wargeyska carbeed ee fadhigiisu yahay London ee lagu magacaabo Al Sharqul Awsar sheegay in Dr Tubaigy uu yahay korneyl ka shaqeeya waaxda amniga guud iyo dambi baarista ee wasaaradda arrimaha gudaha Sucuudiga.
Wareysi uu ninkan siiyay wargeyskaas oo uu la socday sawir isagoo direyska ciidanka xiran ah ayuu sharraxaad uga bixiyay aalad qalab sheybaar ah oo uu u sameeyay si ay khubarada caafimaadka ugu adeegsadaan baaritaannada meydadka, si deg deg loogu ogaado sababaha keena dhimashada dadka muslimiinta ah ee gudanaya waajibaadka Xajka.
Saraakiisha Turkiga ayaa sheegay in Dr Tubaigy uu miinshaar watay marka uu ka soo dagayay garoonka diyaaradaha ee Istambul.
Waxay intaas ku dareen in ninkan codkiisa laga maqlayo cod la duubay oo ay rumeysanyihiin in laga duubay Khaashuqji oo la jirdilayo ka dibna la jarjarayo.
Nin lagu sheegay inuu yahay dhakhtarka ayaa la maqlayaa isagoo dadka kale ee meesha ku sugan ugu yeeraya iney muusig la dhageystaan, xilli uu jarjarayay jirka Mr Khaashuqji, sida laga soo xigtay saraakiisha Turkiga.
Dr Tubaigy Ayaan wali wax jawaab ah ka bixinnin arrintan, hase ahaatee, qof isku shegay inuu abtigiis yahay ayaa shegay in uusan waligiis fal dambiyeed noocaas ah sameyn Karin.
Mr Mutreb ayaa la rumeysanyahay inuu muddo 2 sano ah ka shaqeynayay safaaradda Sucuudiga ee magaalada London.
Macluumaad ay daabacday dowladda Ingiriiska ayaa lagu shegay in qof magacaas leh uu ahaa xog hayaha kowaad.
Telefishinka CNN oo soo xigtay ilo wareedyo ku sugan London oo yaqaanay ninkaas, kuwaasoo sheegay in Mr Mutreb uu ahaa Korneyl ka tirsan sirdoonka Sucuudiga.
Sawirro ayaa muujinaya in ninkan uu ilaa saddex jeer dibadda ula safray dhaxal sugaha boqortooyada Sucuudiga Maxamed bin Salman, tan iyo bishii Maarso ee sannadkan 2018-ka.
Wargeys taageera dowladda Turkiga ayaa daabacay sawir laga qaaday muuqaallada kaamirada CCTV oo uu ka muuqdo qof la rumeysanyahay inuu yahay Mr Mutreb, oo 2-dii bishii Oktoobar sii galayay xarunta qunsuliyadda Sucuudiga ee magaalada Istambul.
Warbaahinta Turkiga ayaa tabisay in Mr Mutreb uu Istambul ku tagay diyaarad khaas ah, ayna isla socdeen Dr Tubaigy.sla maalintaas galinkeeda dambe ayuu ku laabtay diyaarad kale oo khaas ah oo ay ledahay shirkadda Sky Prime Aviation.
Wargeyska New York Times ayaa soo xigtay xirfadyahan Faransiis ah la soo shaqeeyay qoyska boqortooyada Sucuudiga, kaasoo ninkan ku sheegay inuu ka tirsanaa kooxda ammaanka ee la safarta amiir Maxamed Bin Salman.
Mr Alhawsawi ayaa u duulay magaalada Istambul, isagoo la socday diyaarad ganacsi oo tagtay 2-dii bishii Oktoobar.
Wuxuu markii dambe dib ugu noqday diyaaraddii uu la socday Dr Tubaigy.
Bishii Oktoobar ee sannadkii la soo dhaafay ayaa nin isla magacaas leh loo dallacsiiyay darajada labo xiddiglaha, ka dib markii uu geesinimo ku muujiyay difaaca qansiga Amiirka dhaxal sugaha ah uu ku leeyahay magaalada Jida.
Dhacdadaas ayaa ku saabsaneyd nin hubeysan oo toogasho ku dilay 2 ka tirsan ilaalada boqortooyada iyo dhaawicitaanka saddex kale, ka hor inta aan isagana la dilin.
Mr Alharbi ayaa magaalada Istambul ku tagay diyaarad khaas ah wuxuuna uga laabtay diyaarad kale oo khaas ah.
Nin magacaas leh ayaa ka diiwaangashan shabakadda bulshada ee MenoM3ay, waxaana u qoran inuu ka mid yahay ilaalada boqortooyada Sucuudiga.
Nin isla magacaas leh ayaa lagu arkay sawir uu garab taaganyahay amiir Maxamed Bin Salman oo munaasabad ka qeyb galaya sannadkii 2007-dii.
Saraakiisha Turkiga ayaa sheegay in Mr Alzahrani uu Istambul ku tagay diyaarad ganacsi, ka dibna uu ku laabtay diyaarad khaas ah.
Balse wargeyska Washington Post ayaa sheegay in qof ka qabtay taleefan ay waceen oo ku asteysan magacaas uu beeniyay inuu Istambul joogay xilliga la weynayay Khaashuqji.
Nin magacaas leh ayaa lagu sheegay inuu ka mid yahay ilaalada boqortooyada Sucuudiga.
Wuxuu Istambul ku tagay diyaarad ganacsi, wuxuuna ku laabtay diyaarad caadi ah.
Mr Al Cariifi ayaa lagu tilmaamay inuu shaqaale ka yahay xafiiska dhaxal sugaha boqortooyada Sucuudiga.
Wuxuu Istambul ku tagay diyaarad ganacsi, wuxuuna ku laabtay diyaarad khaas ah.
Nin kan ayaa lagu tilmaamay inuu ka shaqeeyo waaxda sirdoonka ee dowladda Sucuudiga.
Mr Al madani ayaa Sucuudiga ku tagay diyaarad ganacsi, wuxuuna dib ugu laabtay diyaarad ganacsi oo kale.
Mishcal Sacad Al
Previous articleDAAWO, wasiir Ku Xigeenka wasaarada Cafimaadka Somaliland oo Degaanka galoolay ka dhagax dhigay Xarun Caafimaad
Next articleXukuumadda Ethiopia Oo Sii Daysay Maxaabiistii Ugu Badnayd